Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Deegaan Istiraatiiji Ah. – Calamada.com
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Deegaan Istiraatiiji Ah.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa tilmaamaya in dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegeen deegaan lagu magacaabo Geedweyne oo ku yaalla duleedka degmada Dooloow ee wilaayada Gedo.
Dad goobjoogeyaal ah ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyey in ciidamada Al-Shabaab ay gudaha u soo galeen degaanka iyagoo aanan la kulmin wax iska caabin ah, islamarkaana ay la hadleen dadka deegaanka.
Maleeshiyaatkii ku sugnaa deegaanka ayaa isaga cararay saldhigyadooda ka dib markii ay ka warheleen in dagaalyahano xoogan oo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab ay soo galeen deegaanka.
Sarkaal ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa Idaacadda Islaamiga Andalus u sheegay in dagaalyahanadoodu ay si buuxda ula wareegeen deegaanka Geedweyne, xaaladuna ay tahay mid degan.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay arkeen boqolaal ka tirsan dagaalayahanada Al-Shabaab oo ku hubeysan hubka fudud iyo garneelada garbaha laga tuuro kuwaas oo ku roondeynayey gudaha iyo hareeraha deegaanka.
Deegaanka Geedweyne ayaa ka mid ah deegaanada dhaca duleedka degmada Dooloow ee ku dhow xad-beenaadka kala qeybiya Kenya iyo Soomaaliya, Waxaana ku sugnaa saldhigyo ku lahaa maleeshiyaat taabacsan maamulka isku magacaabay ‘Jubaland’ ee uu hogaamiyo Axmad Madoobe.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 27-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 28-11-1439 Hijri.